I-china Unique cast iron frying pan lid ingasetshenziswa njengepani lokuthosa Ukukhiqiza neFektri | ISANXIA
Isembozo se-pan yensimbi eyingqayizivele ingasetshenziswa njengepani lokuthosa
Incazelo:Φ240 * 60mm
Izinzuzo ezihlukile:Isivalo singasetshenziselwa zombili izinhloso futhi singasetshenziswa njengepani lokuthosa
Lo mkhiqizo awuyona imbiza kuphela, kepha uyinhlanganisela yezimbiza ezimbili. Ingakwazi ukuhlangabezana nezidingo zokuthosa inyama yezinyama namaphiko enkukhu, kepha futhi ihlangabezane nomgomo wokumisa nokufryisa imifino.
Lawa ma-skillet anomdlandla futhi alungele ukusetshenziswa kepha noma kunjalo ungahle udinge ukuwafaka futhi ukuze uthole isiphetho esibushelelezi nesingcono. Ilungele ukupheka ama-steaks, i-panini, imifino, nokuningi. Usayizi wayo ophanayo unikeza isikhala esanele sokupheka, futhi ungasetshenziswa kuhhavini noma ngaphezulu komlilo wekamu.
Leyo sheen ethandekayo ku-cast-iron cookware iwuphawu lwe-pan enongwe kahle, okuyenza icishe ingasebenzi. Ibhonasi yezempilo, yiqiniso, ukuthi awudingi ukusebenzisa ama-gads kawoyela amazambane ansundu we-crispy noma inkukhu yokusesha lapho upheka ngensimbi eyinsimbi. Ukwenza isizini i-cast-iron skillet yakho, umboze phansi kwepani ngosawoti osawoti kasawoti we-kosher no-intshi oyisigamu wamafutha okupheka, bese ushisa kuze kube yilapho uwoyela uqala ukubhema. Thela usawoti namafutha ngokucophelela esitsheni, bese usebenzisa ibhola lamathawula wephepha ukuze uhlikihle ingaphakathi lepani lize libushelelezi.
Usizo lokusebenzisa amapani ensimbi esikhundleni samapani okungamisi ukuthi ugwema amakhemikhali ayingozi atholakala kuma-nonstick pan.Ungenza noma uthambise izinkwa, ama-casseroles, izitsha zamaqanda, ama-burger, inkukhu, inhlanzi nokuningi; Ngemuva kokusetshenziswa ngakunye, futhi ikakhulukazi ngemuva kokukugeza ngamanzi, kufanele womile kahle bese ulungisa ipani ngamafutha ukuze iqine isikhathi eside.
Zonke izinsimbi zokupheka zethu zensimbi ziyi-LEAD-FREE PFOA ne-PTFE MAHHALA.
Ubuchwepheshe bokushunqa nokungagqoki buxazulula inkinga yokugqwala okulula kwembiza yensimbi. Lobu buchwepheshe bungathuthukisa ukuqina nokuqina kobuso bembiza yensimbi, futhi kwenze ibhodwe libe namandla okulwa nokugqwala okuqinile, futhi lingabe lisathembela kunqubo yesondlo yenkinga, futhi kulula futhi kulula ukuyisebenzisa.
Akukho ukuhlanganiswa kwamakhemikhali okungeziwe ebusweni, ukuze ukupheka kungathinteki ukushisa okuphezulu futhi kungakhiqizi izinto eziyingozi emzimbeni womuntu.Ngokungasebenzi komthamo webhodlela, kuphela ngokusetshenziswa kwansuku zonke, umpheki angakwazi ukumunca igrisi ekudleni, okwenza udonga lwangaphakathi lube bushelelezi futhi lubushelelezi. Ngokuhamba kwesikhathi, izinto zokupheka zizoba ncane futhi kube nzima ukunamathela ebhodweni. Lokhu kunempilo futhi kuqinile ukwedlula imbiza yaseCity yamakhemikhali engeyona induku, imindeni eminingi ithanda ukuguquguquka kwayo nezempilo.
Langaphambilini Ama-double iron iron cast iron skillets awina umklomelo wamachashazi abomvu waseJalimane
Olandelayo: Impilo kanye nentuthu encane kawoyela ihlanzekile insimbi yokuthosa skillet
uNamel Skillet, eqanjwe i-Cast Iron Skillets, I-xtreme Iron Skillet, I-Iron Iron Skillet, i-Iron Iron Skillet engathinti, i-Cast Iron Skillet enamanzi,